Shandura | Zeevou
Zeevou ndiyo nzira yakanakisa yekugadzirisa manejimendi manejimendi manejimendi. Ingoremedza zvivakwa zvako kumusoro pasystem yedu, seta mitengo yako, uye wakanaka kuenda!
Isu tinopa mabhenefiti akaenderana nezvido zvako pamatanho ese. Wedu chiteshi maneja ane yakazara 2-nzira API kubatanidzwa kuyananisa ako mareti uye kuwanikwa, munguva chaiyo, kune anopfuura mazana maviri magero (maOTA uye enzvimbo masosi). Pese panogadzirirwa kubhuka pane chero ewebhusaiti yakabatana, inotumirwa otomatiki. Ruzivo rwevaenzi, mutengo wese, uye rumwe ruzivo rwakanangana nekubhuka zvese zvinopera munzvimbo yedu yepakati.
Kwete izvozvo chete: yedu yakasarudzika-nhanho-yekusimbisa maitiro inovimbisa kuti kubhuka kunoenzaniswa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Mauto anowana kudzora kwakawanda nekutora data revashanyi, kuve nechokwadi chekuti maT & Cs asainwa, uye kutarisa maID. Kubhadhara uye kuchengetedzeka madhipatimendi zvakare otomatiki kuburikidza ne5D yakachengeteka zvinongedzo, uye chengetedzo deposits inochengetwa kusvika makumi mana nemasere mushure mekutarisa-kubuda. Iwe unogona kuvaka yako yekushambadzira runyorwa, wedzera yako yakanangana kubhuka uye kuunganidza chaiyo yekutaurirana ruzivo. Zvakare, iwe unogona kuwana vashanyi vako kuti varatidze yavo yekutarisa-mukati zvavanoda uye vakakumbira mubhedha kumisikidzwa pasina iwe kutosimudza munwe!
Zeevou inokutendera kuti uchengete mapato ese aziviswe neemail kana maSMS panguva yese yekubhuka. Iwe unozogona kumisikidza tsika email maema templates, batanidza kune chaiwo maratidziro mapoinzi, uye upe vako vanochenesa, maAs nevasimari vanodzora mukana weZeevou. Maprofiles akajairwa zvizere uye anogona kutemerwa nerudzi rwemhando uye chivakwa.
Enda kumberi - isa Zeevou neako manejimendi manejimendi, ugare pasi wozorora. Gadzira yakasarudzika mabasa nemaoko kana gadzirisa iyo chizvarwa chenguva dzose mabasa uye zviitiko. Ramba uri pamusoro peyakaunganidzwa bhainhi rako revhiki nevhiki, cheki chekuchengetedza gasi, uye bvumira vashandisi kugovera mabasa kune mumwe nemumwe. Zvese zviri nyore naZeevou.
Yakagadziriswa Check-in Management
Iwe unozokwanisa kugadzirisa ako cheki-mukati manejimendi nekurega Zeevou ichironga nekusimbisa ese maficha ekuuya kwevaeni vako. Sisitimu yedu inongotumira yega yekutarisa-mumirayiridzo kana iwo mashanu-nhanho Kuverenga Maitiro Ekusimbisa kwapera. Kana cheki-yekucherechedzwa seyakasangana & kwazisa, iwe uchave nechokwadi kuti hautambise nguva nekumirira vaenzi vanogona kunonoka. Zeevou anozotumira mameseji kune chero mushandi anotarisira chekupinda-mukati, awa rimwe pamberi pevashanyi 'yakasimbiswa nguva yekuuya!
Remote Kuchengeta Imba
Zeevou's algorithms ane simba anogadzira kwete chete mabasa ekuongorora, asiwo epakati-pekugara pekuchengetera pane yakasarudzika frequency yakagadzwa newe. Nenzira iyoyo, unogona kuona kuti vashanyi vako venguva refu vanochengetwa zvakanaka, pasina kunetsekana kwekutarisa kuti chikamu chavo chakapedzisira kucheneswa riini. Iwe unozokwanisa kukwidziridza kugoverwa kwemabasa otomatiki, ipa vashandi vanodzorwa kuwana kune mashedhiyo, uye nekuteedzera yavo GPS nzvimbo uye nguva pabasa ivo pavangopinda. kukumbira mapikicha kuburikidza neapp. Vanochengeta dzimba nevamwe vashandi vanozogona kumhan'ara nyaya dzekugadzirisa, iwe uchichengetedza mabasa ese, uchiagovera kumakontrakta, uye nekutevera kufambira mberi kusvika padanho rekugadzirisa.
Accounting & Kuchengeta Mabhuku
Iwo mashiripiti haagumire ipapo ... Iwe unogona zvakare kunyora yako yese yemari yaunowana uye zvaunoshandisa mukati medu system, uye uverenge yako mari yaunotsemurwa nevatengesi vako nekukurumidza uye nyore. Zeevou inosanganisirwa naXero kugadzirisa ako ekuchengetedza mabhuku kunyangwe. Kugona kugadzirisa kudzosera mari uye kubhadharisa mari dzekuchengetedzwa usinga bve Zeevou, pamwe nekuva nema invoice otomatiki anogadzirwa nekutumirwa kune vashanyi zvinoreva kuti iwe unogona kudzora zvakanyanya nguva yauri kushandisa pazvinhu zvemazuva ese uye wotarisa pane izvo zvinonyanya kukosha.
Saka - chii chauri kumirira?
Siya iyo kuna Zeevou, uye utarise bhizinesi rako kukura.